M njehie "Of na ebe nchekwa" njehie mgbe ịrụzi a PST /OST faịlụ. Ihe a ga-eme? - DataNumen
Njehie a pụtara gị PST /OST Faịlụ buru oke ibu ma ebe nchekwa dị na sistemụ gị ezughi oke iji weghachite ya. Ke ofụri ofụri, njehie a emee na ụfọdụ ala-ọgwụgwụ kọmputa, na PST /OST faịlụ buru ibu karịa 50GB.
Ndị a bụ ụfọdụ ngwọta maka njehie "Enweghị ncheta":
Wụnye ngwaahịa anyị na kọmputa ọzọ site na iji nhazi ngwaike ka mma ma nwaa ọzọ. Akwadoro ka ị jiri kọmpụta 64bit nwere ihe karịrị 64GB ebe nchekwa yana 64bit Outlook arụnyere iji rụọ ọrụ ahụ. Maka 64bit Outlook, ị nwere ike iji 64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery nke ga-eji ebe nchekwa zuru oke na usoro gị.
Gbaa mbọ hụ na enwere oghere disk na ezughị ezu C: draịva. Windows ga-eji diski oghere na C: ụgbọala dị ka mebere ebe nchekwa. Ọ bụrụ na enweghi oghere disk na-ezughị ezu na C: ụgbọala, mgbe ahụ ị ga-ezutekwa nsogbu dị otú ahụ. Akwadoro ka ị debe oghere disk 100GB n'efu na draịva C:
Ma ọ bụ i nwere ike iji DataNumen File Splitter kewaa gị PST /OST faịlụ n'ime ọtụtụ iberibe, nke ọ bụla maka ihe dịka 10GB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery ịrụkwa ndị a PST /OST faịlụ otu otu ma ọ bụ na ogbe site na ọrụ "Ogbe Mmezi". Agbanyeghị, iji ngwọta a, ịnwere ike idafu ụfọdụ data mgbe ị kewara PST /OST faịlụ na ụfọdụ ozi ịntanetị dị na oke nke faịlụ ahụ, mana ị nwere ike igbochi njehie "Site na ebe nchekwa" emee wee nwetaghachi most nke data.
64bit, DataNumen File Splitter, oghere n'efu, Agaghị echeta, Kewaa